अनावश्यक आरोप खेप्नु पर्ने हो भने, जटिल केस किन लिने? - हिमाल दैनिक
२७ चैत्र २०७५, बुधबार १७:०३
डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्माएकी पूर्व सभासद गायत्री साह र ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालबीच उत्पन्न विवादपछि चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ बसह सुरु भएको छ।
फागुन २८ गते मेडिसिटी अस्पतालमा बच्चा जन्माएकी साहको शिशुमा डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण देखिएको थियो।
अस्पतालले गर्भावस्थामा आवश्यक चेकजाँच र परिक्षण नगरीदिएको कारण डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मिएको अरोप साहले लगाउँदै आएकी छिन्। उनले आफ्नो शिशुको सम्पूर्ण जिम्मा अस्पतालले नलिएसम्म डिस्चार्ज नगर्ने अडान लिँदै आएकी छिन्। अहिले यो विषयले चिकित्सा क्षेत्रमा समेत नयाँ तरंग उत्पन्न गरिदिएको छ।
यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालसँग हिमाल दैनिकले गरेको कुराकानीः
डाक्टरसाब, यो मेडिसिटी अस्पतालमा डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मिएको विषयमा जुन विवाद बाहिर आएको छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
रिजालः डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मिएको विषयलाई अहिले जुन किसिमले नेपाली सञ्चारमाध्यम र समाजमा हौवा बनाइयो यसले चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
हेर्नुहोस्, देशभरीमा सबैभन्दा जटिल केसहरु मैले लिँदै आएको छु। यदि मैले लिएका केसहरुमा यसरी नै समाजले कुनै जटिलता आउनासाथ प्रश्न उठाउने हो भने यस्ता जटिल केस मैले किन लिने? यसले चिकित्सको पेश मात्र होइन नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको अधिकारमाथि पनि समस्या उत्पन्न गराएकोछ।
डाउन सिन्ड्रोम हो के र कसरी हुन्छ?
रिजालः यो डाउन सिन्ड्रोम एक किसिमको सिन्ड्रोम हो जसलाई हाम्रो शरिरको क्राइसोमी २१ पनि भनिन्छ। यो सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मिएपछि त थाहा हुन्छ नै। तर, जन्मनु पहिले नै थाहा पाउने कुरा असम्वभ होइन। त्यसरी गर्भावस्थामा बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम छ वा छैन भनि थाहा पाउन पनि सकिन्छ।
त्यसका लागि पहिलो कुरा त नेपालमा सामान्यतः प्लस माइनस ४० (चालिस आसपासका गर्भवती) वर्ष उमेरका गर्भवती महिलाको अवस्थामा शंका लागेमा चिकित्सकले परिक्षण गर्न र यसबारे पत्ता लगाउन सक्दछन्।
दोस्रो, यदि सम्बन्धित परिवारमा डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण भएका कुनै सदस्य भएमा अथवा त्यसको शंका लागेमा चेक जाँच गर्ने गरिन्छ। अन्यथा सबै प्रेगनेन्सी केसमा यो चेक जाँच गरिदैन। एउटामात्र सिन्ड्रोमको कुरा हुँदैन। हरेक गर्भवती महिलाको सबै सिन्ड्रोम परिक्षण गर्न उसले कति हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठ्छ।
भनेपछि नेपालमा सामान्यतय यसको परिक्षण हुँदैन?
रिजालः नेपालमा बाध्यात्मक परिस्थितीमा मात्रै चिकित्सकले सबै सिन्ड्रोमको परिक्षण गर्ने गर्दछन्। तर, त्यसरी सबै सिन्ड्रोमको परिक्षण नगरेको अवस्थामा कतिपय बच्चामा यो स्थिति आउन सक्ने कुरा कसलाई थाहा हुन्छ र?
त्यसो हो भने अस्पतालले गर्भावस्थामा आवश्यक चेक जाँच नगरी लाहप्रबाही गर्यो भन्नु जायज होइन?
रिजालः यसरी डाउन सिन्ड्रोमको विषय चेक नगरेकोे कारण कुनै संस्थाको बदनाम गराउने वा त्यस संस्थामा कार्यरत चिकित्सकलाई आरोप लगाउने कुरा सर्वथा गलत हो। यस प्रकारका घटनाले अब सबैले पाठ सिक्न जरुरी छ। के गरे राम्रो हुन्छ? गर्भावस्थामा कति परिक्षण गरे हुने र कतिले त्यो गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ।
कुनै पनि चिकित्सकका लागि आफ्नो विरामी नै सर्वस्व हो। जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि उसले आफ्नो विरामी नराम्रो होस् भन्ने चाहेको हुँदैन।
डाउन सिन्ड्रोमको परिक्षण गर्न त सकिने रहेछ नि त?
रिजालः सकिन्छ। नेपालमा पनि हुने खाने र सम्पन्न परिवारले त जतिसुकै खर्च लागेपनि सबै कुराको परिक्षण गर भन्न सक्लान् र गर्लान् पनि। तर, नेपालमा सबै हुने खाने र सम्पन्न नागरिक छैनन्। राजधानी र उपत्यका बाहिर दूरदराजका सर्वसाधारण र विपन्न जनताले आफ्नो पहुँच र सुविधा अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु परिरहेको छ। अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न अस्पतालको पहुँच नभएका सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा पाउने कि नपाउने?
यदि कुनै गर्भवती महिलाको डाउन सिन्ड्रोम परिक्षण नगरेवापत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकले दण्डित हुने स्थिति आउने हो भने अब म र म जस्ता चिकित्सकले आफ्नो पेशामा सेवाको भावना किन राख्ने? मैले कुनै व्यक्ति गरिव होस् वा धनी उसको अवस्था हेर्दिन र सबैका सबै कुरा परिक्षण गर्न लगाउँछु। किन कि कोहि पनि व्यक्ति आफू र आफ्नो पेशालाई संकटमा पार्न चाहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा यी सबै परिक्षण सबै जनताले गर्न सम्भव छ त?
जवाफ स्पष्ट छ। नेपालमा त के जस्तो सुकै धनि मुलुकमा जतिसुकै सम्पन्न नागरिक र सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएपनि सबैका लागि यी सबै परिक्षण गर्न गराउन सम्भव हुँदैन भने, नेपालमा यस्ता विषयमा बारम्बार विवादको विषय किन बनाइदैछ? यो रहस्यको विषय हो।
Prevपछिल्लोनेपालले पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने
अघिल्लोराष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि तयारीNext